JobDescriptionSample.org - စာမျက်နှာ4၏ 99 - ယောဘသည်ဖျေါပွခကျြ၏ကြီးမားစုဆောင်းမှု
လေ့ကျင့်ခန်း Physiologists ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
စစ်ကြော, နည်းဗျူဟာ, သို့မဟုတ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်. Job Skills Requirement စိတ်ဖိစီးမှုစစ်ဆေးခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်, electrocardiograph အသုံးချဖို့ (EKG) ပစ္စည်းကရိယာ. ကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်း၏ထိရောက်မှု၏ display တိကျအသုံးချ. လုံမြှင့်တင်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုထုတ်လုပ်, လွတ်လပ်ရေး, ပါဝင်သူခိုင်မာခြင်း, သို့မဟုတ် operating, စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ, လေ့ကျင့်ခန်းနည်းပညာစံသတ်မှတ်ချက်, နှင့်လိုအပ်ချက်များကို. လေ့ကျင့်ခန်းဇီဝကမ္မဖော်ပြပါ …
Massage Therapists Job Description / တာဝန်တွေပြီးတော့တာဝန်ယူမှု Template ကို
အထူးပညာရေးဆရာများ, အလယ်တန်းကျောင်းကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
Municipal Fire Fighting And Prevention Supervisors Job Description / အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ Template ကို
Cabinetmakers ပြီးတော့ Bench လက်သမားယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ခံမှုနမူနာ
အချပ်, သစ်သားအကြောင်းအရာကို set up သို့မဟုတ်စုဝေး, အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောလက်သမားကိရိယာများ jointers အသွင်အပြင်များနှင့်အလုပ်မလုပ်, နှင့် mortisers ပင်သစ်သားပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပုံသဏ္ဍာန်များအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုလီဆယ်ဖို့, သို့မဟုတ်ဧရိယာမှ, ဖြတ်သစ်သား. Job Skills Prerequisite Produce or construct components for example retailer accessories, ရုံးထွက်ပစ္စည်းများ, cabinetry, သို့မဟုတ်မြင့်မားသောတန်းပရိဘောဂ. …
အိုး, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
pug အလုပ်အပါအဝင် run ဖန်ဆင်းခြင်း devices များ, jigger device ကို, နည်းလမ်းရွှံ့-based အိုး၏လုပ်အတွက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အိုးထိန်းသမားရဲ့ဘီး, မြေထည်နှင့် stoneware ပစ္စည်းများ. Career Skills Qualification Click thumbs into centres of turning clay to form hollows, နှင့်လက်ချောင်းများနှင့်လက်နှင့်ကြီးထွားလာရွှံ့ဆလင်ဒါ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပပေါ်တွန်း, …
ဆရာဝန် Assistant ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ်
ယေဘုယျအားဖြင့်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏လမျးဖွငျ့ဖျြောပစ္စုပ္ပန်ကျန်းမာရေးဖြေရှင်းနည်းများ, ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ညွှန်ကြားချက်အောက်. ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Perform, ဆေးတစ်လက်ပေး, နဲ့လူအကြံပြု. ခွန်အား, အချို့ကိစ္စများတွင်, ဆေးဝါးအကြံပြု. ဆရာဝန်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပတ်သက်. သင်ကြားပို့ချကြောင်းတစ်ခုအသိအမှတ်ပြုအစီအစဉ်ကနေပညာရှင်သင့်. Job Skills Prerequisite Analyze individuals to have details …
လက်လီ Salespersons ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်ပရိဘောဂများအတွက်အဖြစ်, မော်တော်ကား, ကရိယာ, လူတွေကိုသို့မဟုတ်အဝတ်. Career Skills Qualification Meet verify and customers what every client desires or wants. လက်ရှိအရောင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူကျွမ်းသိမ်းဆည်းထားပါ, အပေးအယူနှင့်အကုန်ကျနှင့် ပတ်သက်. မူဝါဒများ, နှင့်လုံခြုံရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်. ခန့်မှန်းဝင်ငွေစွဲချက်, ပြီးပြည့်စုံသောဝယ်ယူမှု, and get and process …
Desktop Publishers Job Description / ခံမှု Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
Bridge And Lock Tenders Job Description / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 12
စာမျက်နှာ4၏ 99« ပဌမ...«23456 » 102030...နောက်ဆုံး »